R/W Khayre oo dhagax dhigay Xabsiga dhexe ee Baydhabo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/W Khayre oo dhagax dhigay Xabsiga dhexe ee Baydhabo
R/W Khayre oo dhagax dhigay Xabsiga dhexe ee Baydhabo
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, oo ay weheliyaan Wasiirro ka tirsan Xukuumadda, Xildhibaano iyo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadam ayaa maanta dhagax-dhigay xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo oo laga dhisayo duleedka magaalada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale booqasho ku soo maray goobta laga dhisayo Xabsigan oo noqon doona midka ugu weyn deegaanada Koonfur Galbeed. Wasiirka Caddaaladda Soomaaliya ayaa ugu horrayntii ka war bixiyey ahmiyadda uu dhismahan cusub ee xabsigu u leeyahay bulshada koonfur galbeed.
Ra’iisul Wasaaraha Khayre ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib, booqasho labo maalin ah oo ku joogay magaalada Baydhabo. Wuxuuna intii uu halkaasi ku sugnaa kulamo kala duwan la yeeshay, Madaxda Koonfur galbeed, Odayaasha dhaqanka, Bulshada rayidka iyo Ciidamadda Xoogga dalka iyo AMISOM oo dhammaantood ay isla soo qaadeen horumarinta iyo xoreynta deegaanada Koonfur Galbeed.
Previous articleGuddoomiyaha G/SHabeelada Hoose oo digniin u diray burcadda dhaca geysata
Next articleShirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey xubin ka mid ah Guddiga Madaxa-Bannaan ee Dastuurka, loogana hadlay Heshiiska Xaquuqda Carruurta iyo arrimo kale.